Mashiinka Gawaarida Gawaarida Gawaarida Gawaarida ah ee Rakhiiska ah Si Loogu Dheeraysto Qashinka Dabiiciga ah iyo Shirkadaha Soo Saara Digada xoolaha | YiZheng
Noocyada 'Groove Type Composting Turner' Mashiin waxaa loo isticmaalaa khamiirka qashinka dabiiciga ah sida xoolaha iyo digada digaaga, wasakhda wasakhda, dhoobada dhirta sonkorta, wasakhda iyo balka cawska. Waxaa si ballaaran loogu isticmaalaa dhirta bacriminta dabiiciga ah iyo dhirta bacriminta isku dhafka ah ee kuleylka aerobic.
Muxuu yahay Nooca Groove ee Nadiifinta Mashiinka Turner?
Noocyada 'Groove Type Composting Turner' Mashiin waa mashiinka halsano aerobic iyo aaladaha roga compost. Waxaa ka mid ah shelf jeexdin, wadada socodka, qalabka aruurinta awooda, leexashada iyo wareejinta qalabka (inta badan loo isticmaalo shaqooyinka taangiyada badan). Qaybta shaqada ee mishiinka rogayaasha compost waxay qaadataa gudbinta duubista horumarsan, taas oo la qaadi karo oo aan la qaadi karin. Nooca wiishka qaada waxaa badanaa loo isticmaalaa xaaladaha shaqada oo leh ballac aan ka badneyn 5 mitir iyo qoto dheer oo aan ka badneyn 1.3 mitir.
Maxay tahay nooca loo yaqaan 'Groove Type Compost Turner'?
(1) Noocyada 'Groove' composting Turner loo isticmaalo halsano ee wasakhda dabiiciga ah sida xoolaha iyo digada digaaga, qashin daadinta, dhoobada dhirta sonkorta lagu karsado, doolshaha digaagga iyo balka cawska.
(2) Rog oo walaaq walxaha ku jira haanta halsanda oo dib ugu noqo si aad ugu ciyaarto saamaynta dhaqso u leexashada iyo xitaa walaaqida, si loo helo xiriir buuxa oo u dhexeeya maaddada iyo hawada, si ay saamaynta halsano ee maaddadu ay u fiicnaato.
(3) Noocyada 'Groove' composting Turner waa qalabka udub dhexaad u ah nafaqeynta aerobic firfircoon. Waa sheyga guud ee saameeya isbeddelka horumarka ee warshadaha compost.
Ahmiyada ay leedahay Noocyada 'Groove' composting Turner laga bilaabo doorka ay ku leedahay wax soo saarka compost:
1. Isku qasidda maaddooyinka kala duwan
Soo saarida bacriminta, qaar ka mid ah qalabka kaabayaasha ah waa in lagu daraa si loogu habeeyo saamiga kaarboon-nitrogen, pH iyo waxyaabaha biyaha ka kooban ee alaabta ceeriin. Qalabka cayriin ee ugu muhiimsan iyo qalabyada si wada jir ah isugu duuban, ujeedada isku dhafka isku dhafka ah ee walxaha kala duwan ayaa lagu gaari karaa inta la rogayo.
2. Isku dheellitir heerkulka raso ee alaabta ceeriin.
Tiro badan oo hawo nadiif ah ayaa la keeni karaa oo si buuxda loola xiriiri karaa alaabta ceyriinka ah ee ku dhexjirta isku darka, taas oo ka caawin karta noolaha aerobic-ka inuu si firfircoon u soo saaro kuleylka halsano isla markaana uu u kordhiyo heerkulka tuulmada, heerkulkiisuna sarreeyo ayaa ku qaboojin kara buuxinta joogtada ah ee cusub. hawada. Markaa waxay sameysmayaan xaalad isweydaarsi heerkulka-heerkulka-heerkulka-dhexe, iyo bakteeriyada jeermiska yar-yar ee faa'iido leh ayaa koraan oo si dhakhso leh ugu tarma xilliga kulaylka.
3. In kor loo qaado marinka waxyaalaha ceeriin ee duudduuban.
Ku nooc jeexdin jeexjeexa como ka baaraandegi karaa maaddada guntooda yar yar, samaynta maaddada guntin iyo isafgarad leh, qalafsan oo jilicsan oo jilicsan, oo sameysma is-beddel ku habboon qalabka.
4. Dheellitir qoyaanka raso ee alaabta ceeriin.
Qoyaanka ku habboon ee kuleylka maaddada ceyriinka ah waxay ku saabsan tahay 55%. Khamiirinta hawlgalka leexashada, falcelinta firfircoon ee bayoolaji ee sheyga aerobic-ka waxay abuuri doontaa qoyaan cusub, iyo cunista alaabta ceeriin ee ay ku yartahay oksijiin-qaadashada hawada waxay sidoo kale sababi doontaa in biyuhu lumiyaan sideyaasha oo ay banaanka u baxaan. Sidaa darteed, habka bacriminta, biyaha ayaa lagu dhimi doonaa waqtiga. Uumiga waxaa sii dheer uumi sameynta kuleylka kuleylka, alaabada ceeriin ee soo noqota waxay sameysmi doonaan wasakheynta uumiga biyaha.
Codsiga Nooca Groove Nooca Composting Turner Machine
1. Waxaa loo adeegsadaa khamiirinta iyo howlaha ka saarida biyaha dhirta bacriminta dabiiciga ah, dhirta bacriminta isku dhafka ah, warshadaha qashinka dhoobada ah, beeraha jardiinada iyo beeraha likaha.
2. Ku habboon khamiirka aerobic, waxaa loo isticmaali karaa iyada oo lala kaashanayo qolalka kuleylka qoraxda, taangiyada halsano iyo kuwa wareejiya.
3. Badeecadaha laga helay kuleylka aerobic-ka ee heerkulka sare waxaa loo isticmaali karaa hagaajinta carrada, cagaarka beertada, daboolka qashinka, iwm.
Waxyaabaha Muhiimka u ah Xakamaynta Bisaylka Compost
1. Xeerka saamiga kaarboon-nitrogen (C / N)
C / N ku habboon kala-goynta walxaha dabiiciga ah ee noolaha guud wuxuu ku saabsan yahay 25: 1.
2. Xakamaynta biyaha
Sifeynta biyaha ee compost ee wax soo saarka dhabta ah guud ahaan waxaa lagu xakameeyaa 50% ~ 65%.
3. Xakamaynta hawo bixinta
Siinta hawo oksijiin ah ayaa ah qodob muhiim u ah guusha compost. Waxaa guud ahaan la rumaysan yahay in ogsijiinta ku jirta raso ay ku habboon tahay 8% ~ 18%.
4. Xakamaynta heerkulka
Heerkulku waa cunsur muhiim ah oo saamaynaya hawlgalka habsami u socodka noolaha compost. Heerkulka halsano ee compost heerkulkiisu sarreeyo waa 50-65 digrii C, oo ah habka ugu badan ee xilligan la isticmaalo.
5. Xakamaynta milixda asiidhka (PH)
PH waa cunsur muhiim ah oo saameeya koritaanka noolaha. PH isku darka compost-ka waa inuu ahaadaa 6-9.
6. Xakamaynta urta
Waqtigaan la joogo, in yar oo noole ah ayaa loo isticmaalaa in jirka lagu nadiifiyo.
Faa'iidooyinka Nooca Groove Noocyada Composting Turner Machine
(1) Haanta halsano si joogto ah ayaa loo sii deyn karaa ama weynaan karaa.
(2) Hufnaan sare, hawlgal siman, xoog leh oo waara.
Nooca Groove Composting Turner Machine Video Display
Xulashada Nooca Groove Composting Turner Model
Xawaaraha Socodka （m / min）
Awood (m3 / h)
Hore: Qalabka Compost Bacda Jumlada Shiinaha - Is-wadaha Isukeenista Mashiinka Turner - YiZheng
Xiga: Saxan silsilad Compost Turning